Grandvalira နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၌မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်အနားယူပါ ခရီးသွားသတင်း
မော်နီကာဆန် | | အင်ဒိုရာ, အချိန်အား
အလွန်ပူသောနွေရာသီကုန်လွန်ပြီးနောက်မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်ဖြစ်မည်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အချိန်တန်ပြီ။ ဘယ်မှာလဲ On နင်, ဆောင်းရာသီအားကစားလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ: နှင်းလျှောစီး။ သင်၏ခြေထောက်နှင့်လက်မောင်းကိုသင်၏နှင်းလျောစီးအားကစားတွင်ပျော်မွေ့စေရုံသာမကအန်ဒိုရာ၏ဤထောင့်ရှိလှပသောနှင်းဖုံးနေသောရှုခင်းကိုတွေ့မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းလည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဘာမှမမေ့နိုင်အောင်နှစ်ကိုအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့စာရင်းပြုစုဖို့သင့်ကိုကူညီပေးပါရစေ။ Grandvalira မှာရှိနေတဲ့သင့်ဘဝရဲ့အထူးမှတ်ဉာဏ်ကို ထား၍ ။
1 Grandvalira ကဘာလဲ၊ ဘယ်မှာလဲ။
3 Grandvalira ကိုငါဘာသွားဖို့လိုအပ်ပါသလဲ
Grandvalira ကဘာလဲ၊ ဘယ်မှာလဲ။
၎င်းသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအန်ဒိုရာ၏စည်းမျဉ်းအတွင်း Pyrenees တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Pyrenees ၏အကြီးဆုံးနှင်းလျှောစီးareaရိယာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ၏အလယ်ဗဟိုမှအရှေ့ဘက်သို့ပြင်သစ်နှင့်နယ်စပ်အထိစီးဆင်းသောတောင်စောင်း ၂၁၀ ကီလိုမီတာရှိသည်။ ၎င်းကို Valira de Oriente မြစ်၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းကွဲပြားခြားနားသောလမ်းကြောင်းခြောက်ခုဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်သည် Pas de la casaအဆိုပါ Grau Roigအဆိုပါ Soldeu, အဆိုပါ Tarterအဆိုပါ Canillo နှင့် စခန်းချသည်.
အနိမ့်ဆုံးအမြင့်သည် ၁၇၁၀ မီတာ၊ အမြင့်ဆုံးမှာ ၂၅၆၀ မီတာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်1710ရိယာအားဖြင့် ၁၃၆ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသောဆီးနှင်းအမြောက်အမြောက် ၁,၀၂၇ လည်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့် or ည့်သည်သည်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ န်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ ကော်ဖီဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်, ပထမဦးဆုံးအကူအညီ, အမြန်အစားအစာစားသောက်ဆိုင်, သူငယ်တန်း, နှင်းလျှောစီး / ဆီးနှင်းကျောင်း, ကားရပ်နားသည်နှင့်သင်တန်း၏ အိမ်သာများ.
ဆောင်းရာသီတွင်ဤလှပသောနှင်းဖုံးနေသည့်ရှုခင်း၏အလယ်တွင်ပြုလုပ်သောလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသည်။ နှင်းလျှောစီးမကြိုက်သူသို့မဟုတ်အခြားအရာများလုပ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သူများပင်လျှင်များလွန်းလှသည်။ သူတို့တစ်တွေကြီးစွာသောအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်.
ဥပမာအားဖြင့်သင်လေ့ကျင့်နိုင်သည် ကျွနုပ်ခွေးတွေကဆွဲထုတ်ထားတဲ့စွတ်ဖား၊ \_ t နှင်းလျှောစီးနှင့်စီးပါ, Cross- Country နှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ်ညဉ့်အစင်း, ချစ်သူ, စွန့်စားမှု circuit ကိုခရီးသွားလာ, နှင်းလျှောစီးတတ်ရန်သင်ယူပါ အရင်ကဆိုရင်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အစပြုသူတွေအတွက်နေရာမှာ…တိုတိုပြောရရင်လုပ်စရာတွေများလွန်းရင်ပျင်းဖို့စဉ်းစားဖို့တောင်အချိန်မရှိတော့ဘူး။ 😉
အထောက်အထား: Grandvalira ကိုရောက်ဖို့မင်းက Andorra ကိုသွားရမယ်၊ ဒါကဘယ်နိုင်ငံသားမှဗီဇာမလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံပဲ။ အရေးကြီးသောအချက်မှာသင်၏တရားဝင်ကဒ်ပြားသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်မိသားစုစာအုပ်တို့သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
အပူအ ၀ တ်အစားများအပူချိန်အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးမှာအလွန်နိမ့်သောကြောင့်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သော -10 -C ။ ထို့ကြောင့်အအေးမိခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်သင်အားကစားဝတ်စုံဆိုင်များ၌တွေ့ရသည့်အဝတ်အစားကဲ့သို့သောသက်သောင့်သက်သာရှိသောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်သင့်သည်။
ဓာတ်ပုံကင်မရာဖြေ။ ။ ခရီးသွားတဲ့အခါကင်မရာကအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင် charger ကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်သွားရန်သေချာအောင်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ရှိပါ။
မိုဘိုင်းဖုန်း: သင်ကဒါကိုအိမ်မှာမထားခဲ့ဘူးဆိုတာငါတို့သိပေမယ့်သင့်မှာဘက်ထရီအပြည့်နဲ့အမြဲရှိနေဖို့အရေးကြီးတယ်၊ အဲဒါကိုသင်နဲ့အတူယူဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကသင်ချစ်ရသူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရစေရုံသာမကဘဲ လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။
Gafas က de solကြယ်၏ဘုရင်၏မျက်စိကိုလည်းကာကွယ်ရမည်။
ငါတကယ်ပျော်ချင်တယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ သို့သော်၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စကိတ်စီးအပန်းဖြေစခန်းရှိသင်၏နေ့ရက်များသည်မယုံနိုင်စရာရှိမရှိအပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။
သင်၌စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အချိန်ဖြုန်းတီးရန်မလိုပါ (သို့မဟုတ်) အချိန်ဖြုန်းရန်မလိုပါကပစ္စည်းများကိုသင်ငှားရမ်းနိုင်သည် Grandvalira အတွက်နှင်းလျှောစီး။ နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းရှိစျေးဆိုင်များစွာသို့သွားခြင်းဖြင့်သင့်ဘွတ်ဖိနပ်များနှင့်သင်၏နှင်းလျှောစီးများသို့မဟုတ်နှင်းလျှောစီးများရှိနိုင်သည်; ဟိုတယ်တွေမှာတောင်ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသူတို့ဖောက်သည်တွေဆီပြန်လည်ပတ်စေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့တည်းခိုခန်းနှင့်အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်များတွင်အထူးလျှော့စျေးပေးသည်။
နှင်းလျှောစီး: ၁၆ ယူရိုမှ (ကြေးဝါအမျိုးအစားများမှ)၊ ၂၁ ယူရို (ငွေရောင်) နှင့် ၂၇ ယူရို (ရွှေ) မှ။
နှင်းလျောစီး 12 နှစ်အထိ: 18 နှစ်အထိကလေးများအဘို့။
နှင်းလျှောစီးဖိနပ်: 9,50 ယူရို (ငွေ) မှ 11 ယူရို (ရွှေ) အထိ။
12 နှစ်အထိကလေးများအတွက်ဖိနပ်:6ယူရို။
အရွယ်ရောက်သံခမောက်:5ယူရို။
ကလေး ဦး ထုပ်:3ယူရို။
ရက်ကက်: 10 ယူရို။
စကားမစပ်၊ လူ ၃၀ ကျော်ဖြင့်အဖွဲ့တစ်ခုကိုဖွဲ့ပါကအထူးလျှော့စျေးများရလိမ့်မည်ကိုသင်သိသင့်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူသိအများဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုမှာရက်အနည်းငယ်နေချင်ရင် Grandvalira ကိုမသွားပါနဲ့။ သင်နောင်တမရပါ😉။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » အင်ဒိုရာ » Grandvalira တွင်မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်အနားယူပါ